vendredi, 17 janvier 2020 19:22
Fahasalamam-bahoaka: Nanolotra fitaovana ara-pitsaboana maoderina mitentina 4,5 tapitrisa dolara ny Amerikanina
Hanampiana ny mpiasan’ny fahasalamana hanatsarana ny kalitaon’ny asa ara-pahasalamana amin’ireo tobim-pahasalamana eto Madagasikara ireo fitaovana ara-pitsaboana maoderina mitentina 4,5 tapitrisa dolara, natolotry ny fanjakana amerikanina, amin'ny alàlan'ny Sampandraharaha Amerikana Misahana ny Fampandrosoana Iraisam-pirenena (USAID) ireo. Homena ny tobim-pahasalamana any amin'ny faritra 10 eto Madagasikara iasan’ny tetikasa ACCESS ny fitaovana ara-pitsaboana, izay ahitana fandrianan’ny hopitaly, fangalana tosi-drà, stéthoscopes sy maro hafa, raha toa ka atokana ho an'ny tobim-pahasalamana fototra sy ny hopitalin’ny Distrika ary ny biraon'ny fahasalamana ao amin'ny Distrika ny solosaina « tablette » sy ny laptop. (Jereo Sary Tohiny)
vendredi, 17 janvier 2020 12:41
Firarazana-Tampoketsa: Zanakazo maherin’ny 1 tapitrisa no hambolena amin’ny alahady 19 janoary 2020
Efa vonona ny toerana, toy izany koa ny zanakazo hovolena amin’ny alahady 19 janoary 2020, hanombohana ofisialy ny taom-pambolenkazo taona 2020, izay hatao eny Firarazana, Tampoketsa, Distrikan’Ankazobe. Zanakazo maherin’ny 1 tapitrisa no hambolena eny an-toerana amin’io andro io, olona an’arivony no andrasana hanatanteraka izany eny an-toerana, tarihin’ny avy eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika sy ny Ministera misahana ny Tontolo Iainana, ny avy amin’ny andrim-panjakana, ny ministera ary ny mpitandro filaminana. (Jereo Sary Tohiny)
Fianakaviana amina tokantrano iray maka aina eo an-tokontany noho ny hafanana no nilatsaham-baratra tampoka tao Tsarahizana, Kaominina Anjahamany Distrikan’i Brickaville ny alatsinainy 30 desambra 2019. Efa-mianaka izy ireo no voa ka maty tsy tra-drano ny zazakely iray vao roa taona, naratra kosa ny telo, izay vehivavy mitondra vohoka dimy volana ny iray, ary rafozambavy sy ny zanany lahy ny roa ambiny. Mbola tsaboina ao amin’ny hopitaly be Analakininina Toamasina ilay ramatoa bevohoka noho ny hamafin’ny fahavoazany ; efa afaka nody kosa ny roa hafa rehefa avy nandalo fizahana sy nahazo fitsaboana sahaza. Manao antso avo amin’ireo malalatanana afaka hanampy azy ilay ramatoa fa tena sahirana ara-bola ny tenany.
Mahatratra 1.34 miliara ankehitriny ny isan'ireo Indianina, faharoa maro indrindra eran-tany aorian'ny Sinoa miisa 1.38 miliara amin'ny mponina maneran-tany eo amin'ny 8 miliara eo. Hiakatra 1.67 miliara, raha ny tombana, ny isan'ny Indianina, izay mitombo 25 tapitrisa isan-taona, izany hoe mitovy amin'ny isan'ny Malagasy isan-taona ny fiakaran'ny isan'ny mponina ao Inde. Tsy maharaka ny famokarana sakafo ho an'ny mponina, tsy maharaka ny trano, ny fitaterana, ny fitsaboana, ka napetraky ny fanjakana ny lalàna hamerana ny isan'ny mponina. Ka efa mihatra ny tsy fahafahan'ireo mpiasam-panjakana hiteraka mihoatra ny roa. Ankehitriny, dia misy solombavam-bahoaka 100 mahery no te hametraka lalàna hanitarana an'io fepetra io amin'ny rehetra, mba hamerana ny zaza teraka, izay arahina fepetra ho an'ireo mbola miteraka ambon'izany, toy ny fanalana ireo fanampiana omen'ny fanjakana, fanesorana ny fiala-tsasatry ny ray niteraka, eny hatramin'ny tsy fahafahana mifidy sy fidiana intsony. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 13 janvier 2020 10:44
Sary Tafika Malagasy
Bekotro maroholatra: Misy ny fanisana ireo akanga sisa nanamborana
Midina ifotony mitety Distrika miisa 22 ny mpiasa eo anivon'ny vondron'ny mpiady tia Tanindrazana, ao amin’ny Rezimanta Voalohany etsy Analakely-Antananarivo, mba hanamarinana sy hanisana ireo bekotro maroholatra mbola velon’aina, ambany fiahian'ny foibem-pitondran'ny Mpiady tia Tanindrazana. Voakasik' izany ny Distrikan’Antanifotsy, Vohipeno, Farafangana, Lalangina, Isandra, Fianarantsoa, Ambalavao Tsienimparihy, Ambohimahasoa, Ambositra, Ifanadina, Manakara, Ikongo, Vangaindrano, Vondrozo, Toamasina, Brickaville, Vatomandry, Antanambao Manampotsy, Mahanoro, Ambatondrazaka, Moramanga, Anosibe an'Ala, Manjakandriana, Marolambo ary Ambovombe. (Jereo Sary Tohiny)
Sary: Tafika Malagasy
Mandray ny andraikitra amin'ny fitsaboana ireo traboina taorian’ny fiakaran’ny ranobe vokatry ny rotsak’orana ny herinandron’ny taombaovao teto Mahajanga ny miaramila mpitsabo avy ao amin'ny RM4 na Faritany Miaramila fahaefatra eto Mahajanga, mitety ireo Fokontany miisa dimy lasibatry ny rano be, miaraka amin’ireo « Clinique Mobile » nalefan'ny fitondrana. (Jereo Sary Tohiny)
Sary: Commune Urbaine de Mahajanga
Nanao fampitam-baovao ny teo anivon’ny fiadidiana ny tanànan’i Mahajanga fa « voatery nanafoana ny fitsidihany aty Mahajanga ny Filoham-pirenena, izay tokony natao tamin’ity andro alakamisy ity noho ny tondradrano misy ao an-drenivohitra izay nahamoizana ain'olona ». Nisy na izany aza ny fizarana fanampiana ho an’ireo traboina noho ny ranobe teto an-drenivohitr’i Boeny ny herinandron’ny taombaovao lasa iny, izay natao teo amin'ny EPP Fiofio androany maraina, izay notarihin’ny Lefitry ny Antenimieram-pirenena faritany Mahajanga, Rahantanirina Lalao na Ninà. Ireo traboina namonjy ny "site d'hébergement" efa voasoratra anarana tamin’ny fotoan'ny voina no nisitraka ny fanampiana.
Hatao ny 19 janoary 2020 izao ny fanokafana ny fambolen-kazo ho an’ny taona 2020, ka any Tamponketsa Ankazobe no hanatanterahana izany. Miara-mandrindra ny fanatanterahana azy ny minisiteran’ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra, ary ny Fiadidiana ny Repoblika. Efa mivonona amin’ity fambolen-kazo ity ihany koa ny foibe iraisam-paritry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra Atsimo Atsinanana, Anosy ary Androy. Zanakazo an-tapitrisany no vokariny amin’ireo tanin-janakazo miisa telo ho fanatanterahana izany, toy ny ao Fanjahira, Kaominina Ifarantsa, Distrikan’i Tolagnaro, misy velarantany 10 hektara, ary efa misy zanakazo 3 tapitrisa vonona. Misy tanin-janakazo ihany koa ao Mangarivotra ho an’ny Faritra Androy sy Namohora Farafangana ho an’ny Faritra Atsimo Atsinana, izay samy afaka mamokatra zanakazo 5 tapitrisa. (Jereo Sary Tohiny)
Tsy misy miafina ny toetr'andro eto Antananarivo renivohitra sy ny foto-drafitrasa misy ankehitriny. Efa fantatra mialoha ny ranon'orana, ny rano maloto avy any an-trano, ary ireo rano maloto avoakan'ny ozinina. Misy 2 tapitrisa eo ny isan'ny mponina eto Antananarivo, ny olona iray dia tombanana mampiasa rano 50 litatra isan'andro, raha tokony 100 litatra raha manana rano an-trano, ka raha ny atsasak'io rano ampiasaina io no very, avy hisasana, avy anasana lamba, fiara... dia mahatratra 2 000 000 *25 litatra izay = 50 000 000 litatra no mila ariana. Misy no very avy hatrany midina ambanin'ny tany, fa misy kosa no very anatin'ny fanariana ny rano maloto. Raha zaraina 2 koa izay, dia misy 25 000 000 litatra na 25 000m3 izany no tsy maintsy ariana.